China Custom Wholesale A4 Gazety Gazety Mpanamboatra sy mpamatsy | Fanontana fahalalana
Anaran'ny vokatra: ny fanontana gazety an-tsarimihetsika A4 vita amin'ny entana
Fitaovana: rakotra taratasy, sary kanto
Mahery. Beautiful. Fikirizana. Na inona na inona tantaranao dia tsy maintsy atantara ilay boky.
Lazain'izy ireo fa samy manana ny boky ny tsirairay. Saingy tsy ny rehetra no afaka manoratra azy io. Raha manao ezaka sy fotoana betsaka amin'ny fanoratana boky ianao, dia mendrika ny hahita azy io pirinty amin'ny hardcover mahafinaritra noho ny ankamaroan'ny olona.
Na zava-misy na foronina, na feno ny fomba famoahana sary na sary, afaka manome anao karazana takela-pamoronana sy faranana marobe, karazan-taratasy sy lanja, habeny ary safidy safidy.
Ny boky matevinay dia mafy sy mateza mba hipetrahana am-pireharehana amin'ny talen'ny mpamaky. Izy ireo dia mety rehefa mila mamerina ny tantaranao ianao.
Ny orinasa anay dia mpanamboatra boky amin'ny Qingdao, CHINA. Miaraka amin'ny traikefa famokarana be dia be mihoatra ny 16000 mahery, afaka manolotra vidiny sy kalitao tsara kokoa ary ambany kokoa ny MOQ.
Aza adino raha tsy mivarotra boky vita sy tahiry rehetra izahay. Manolotra serivisy fanontana boky izahay ary mila rakitra PDF vektor hanonta. Mba hanomezana vidiny marina, mila fantarintsika ny haben'ny bokinao, ny haben'ny pejy ao anatiny, ny lokon'ny rakotra ary ny anatiny, sns.
Ny habe izay ataonay matetika dia 8.5 * 11inch, 8.5 * 5.5inch, 8 * 8inch, 7 * 7inch, 6 * 9inch, sns.
1. Mpanamboatra izahay, manana orinasa ary afaka mifehy tsara ny kalitao
2. Matihanina amin'ny fanontana mandritra ny 16000 mahery
3. Ny ranomainty, ny fitaovana ary ny taratasy
4. Manana ekipa matihanina matihanina ao amin'ny orinasa izahay
5. milina fanontana Heidelberg 4C / 6C mba hahatonga ny loko feno kokoa.
6. ny fatorana samy hafa, toy ny famatorana tonga lafatra (fizarana nozaina), ny famonosana ny kofehy, ny fametahana kofehy, ny tsiranoka, ny WO, ny fatorana mafy, sns.
7. Manana asa-tanana isan-karazany isika, toy ny mafana stamping, spot UV, lamination glossy / matte, embossing / debossing, varnishing, sns
Ao anatin'ireo tsena lehibe ataontsika
Etazonia, Canada, Mexico, Australia, Eropa, Azia Atsimoatsinanana, Rosiana, China, Japon, Korea Atsimo, Afovoany, Afrika, Amerika Atsimo, sns.
Previous: Ankizy manonta boky matevina miaraka amin'ny lohany sy lamba
Manaraka: Fametahana bokotra lafo vidy amin'ny famatsiana tonga lafatra